"I-Little Haven" Pool House Suite
Paget, Paget Parish, i-Bermuda
Ikamelo e-ikamelo lezivakashi ibungazwe ngu-Kali & Azuree
I-“Little Haven” inakho kanye okudingayo ukuze “...uhambe ngokuthula...”. Uma uqedile *ngompheki wakho kanye nezifundo eziyimfihlo *ze-yoga, thola *ukubhucungwa kwe-Thai endaweni ngaphambi kokuthatha uhambo lwemizuzu engu-15 ukuya e-Elbow Beach. Uma ufuna ukuphuma ekubeni nompheki womuntu siqu, sebenzisa ikhishi; kunezitolo zokudla ezimbili eziseduze; umzuzu owodwa ongu-1 kanti omunye imizuzu emi-3 uhamba ibanga elide noma ungacabanga ukuhamba ngezinyawo imizuzu engama-20 ungene eHamilton uyothenga nokudla.
Umpheki Womuntu Siqu, *I-Yoga (imisiwe okwesikhashana) kanye *Nokubhucunga (okumisiwe okwesikhashana) kudinga okungenani isaziso sangaphambi kwesikhathi samahora angu-24 ukuze kuqinisekiswe ukutholakala.
Izinkonzo Zobapheki Zomuntu Siqu ziyizinto zemenyu + $30/hr (ubuncane bamahora angu-2 ezintweni zemenyu yegumbi kanye nobuncane bamahora angu-3 wama-oda e-bespoke) kanye nenkokhiso yesevisi engu-17%.
Isilinganiso se-Yoga ne-Massage Therapist ngu-$85/ihora.
4.97 ·128 okushiwo abanye
4.97 · 128 okushiwo abanye
Kukhona ujantshi wesitimela omdala ngaphandle nje kwendawo ejwayele ukusetshenziselwa ukugijima, ukugibela ibhayisekili noma ukuzilibazisa. Izindaba ezimbili ezisondelene kakhulu zegrosa, ikhemisi, i-ATM, izindawo zokudlela, igalaji likaphethiloli, ukuqashwa kwamabhayisikili/isikuta (zonke ibanga lokuhamba eliyi-1-5mins) kanye namabhishi amahle esihlabathi apinki. Sinendawo ekahle, eseduze nayo yonke into oyidingayo... kungakhathaliseki ukuthi yini oyithandayo, vele ubuze...
Ibungazwe ngu-Kali & Azuree
Traveled the world and have met many wonderful diverse people and look forward to sharing experiences through service and hospitality.
UKali & Azuree Ungumbungazi ovelele